20 Qalabka Cusub ee Baraha Bulshada ee Ganacsatada | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/20 Qalabka Warbaahinta Bulshada ee cusub ee ganacsatada
20 Qalabka Warbaahinta Bulshada ee cusub ee ganacsatada
Ka faa'iidayso aaladaha warbaahinta bulshada ee cusub oo la cusbooneysiiyay si kor loogu qaado ganacsigaaga internetka ee ganacsigaaga.
Waa kuwan liiska soo-bandhigidda iyo cusboonaysiinta baraha bulshada. Waxaa jira qalab loogu talagalay maaraynta macluumaadka, wax-soo-saarka fiidyowga, sawirada 3D, ka-faa'iidaysiga macluumaadka, maalgelinta amaahda-yar, isku xidhka ganacsigaaga, iyo in ka badan.
Facebook ayaa siidaayay App-ka Studio Facebook ayaa soo saartay barnaamij mobaylada (iOS iyo Android) oo loogu talagalay abuurista Studio. Soo gal fikradaha si aad u aragto sida qoraalkaagu u shaqeeyo. Samee hagaajin, arag ogeysiisyada, u beddel boggaga, la xiriir dhagaystayaashaada wakhtiga dhabta ah, iyo in ka badan.
Facebook Abuuraha Studio
Muuqaalka Sawirrada 3D ee Facebook ayaa u beddela sawirro 2D 3D. Sawirada 3D ee Facebook markii hore waxay suurtogal ka ahaayeen oo keliya taleefannada casriga ah ee leh laba kamaradaha. Nidaamku hadda wuxuu qeexayaa qaabka 3D ee sawir kasta, haddii ay tahay tallaal cusub oo ku saabsan qalabka Android ama iOS oo leh kamarad halbeeg ah ama sawir tobanaan sano jir ah oo dhawaan lagu dhejiyay telefoon ama laptop.
Aaladda Hawsha ee Off-Facebook ee Facebook ayaa xakameyn karta xogta bartilmaameedka xayeysiiska. Qalabka cusub ee Hawsha Ka-baxsan Facebook, isticmaalayaashu hadda way maamuli karaan oo tirtiri karaan xogta bartilmaameedka ah ee lala wadaago mareegaha iyo apps-yada qolo saddexaad ujeeddooyin xayaysiisku.
Kooxda NPE-da ee Facebook ayaa soo saartay abka Pinterest-ka Hobbi. Waxaa dhisay Kooxda NPE-da ("Tijaabada Alaabada Cusub") ee Facebook-ga, Hobbi waa barnaamij wadaaga sawir iyo muuqaal si ay u caawiyaan dukumeentiyada mashaariicda iyo hiwaayadaha. U habbee sawirada ururin muuqaal ah. Abuur muuqaallo muuqda si aad u wadaagto.
Barnaamijka Iskaashiga ee Instagram wuxuu u oggolaanayaa abuurayaasha IGTV inay lacag ka sameeyaan waxa ku jira. Siddeed iyo toban bilood ka dib markii la furay xarunta qaab-dhismeedka muqaalka ee qaabka dheer, Instagram ayaa gudaha ku samaysay barnaamij shuraako ah si ay u oggolaadaan abuurayaashu inay lacag kasbadaan iyagoo muujinaya xayeysiisyada ay la socdaan fiidiyowyadooda. Instagram ma aysan qeexin kala qaybsanaanta dakhliga, laakiin barnaamijku wuxuu u shaqayn karaa si la mid ah Facebook Watch, kaas oo bixiya abuurayaasha boqolkiiba 55 dhimis.
Instagram waxay ku daraysaa saamaynta Boomerang. Shan sano ka dib markii la bilaabay, qaabka kamarada Boomerang ayaa helaya cusbooneysiin. Isticmaalayaashu hadda waxay ku dari karaan dhaqdhaqaaq gaabis ah, "Echo" bluring, iyo "Duo" dib u soo celinta degdega ah ee Boomerangs-kooda, iyo sidoo kale gooynta dhererkooda.
Boomerang waxay leedahay qalloocyo hal abuur cusub oo kaa dhigi doona inaad tidhaahdo yaaasssss. Isku day dhamaantood maanta. pic.twitter.com/wp0A71RefL
- Instagram (@instagram) Janaayo 10, 2020
Instgram-ku waxa uu bilaabayaa qaab abuur Abuur hab u ogolaanaya isticmaalayaashu inay isku daraan dhejiyeyaal is dhexgal ah, sawirro, iyo qoraal iyaga oo aan u baahnayn sawir ama muuqaal si ay u wadaagaan. Qayb ka mid ah Abuurku waa ikhtiyaarka "Maalintan" oo tusaysa qoraal aan toos ahayn oo aad hore ula wadaagtay isla taariikhda taariikhda. Taabo batoonka laadhuuda qoraal cusub oo Maalintan ah, oo marka aad mid hesho, la wadaag Sheekooyinka sidii qoraal gundhig ah oo dadku furi karaan.
Twitter ayaa u fura jawaabaha Qari horumariyeyaasha. Bishii Nofembar, Twitter-ku wuxuu siidaayay muuqaalkeeda Hide Replies, taasoo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay qariyaan jawaabaha tweet-kooda. Hadda Twitterku wuxuu siidaayay Jawaabaha Qari sida barta dhamaadka API-ga cusub, taasoo u oggolaanaysa horumariyayaashu inay abuuraan qalab si toos ah u qariya tweets-ka carqaladeeya.
Twitter-ku waxa uu iibsadaa qaab-sameeyaha Sheekooyinka Chroma Labs. Twitter ayaa soo iibsatay Chroma Labs, abuuraha abka Chroma Stories kaas oo bixiya habab lagu dhejiyo isku-xidhka Sheekooyinka Instagram, Snapchat, iyo kuwa kale.
Abka cusub ee Vimeo wuxuu caawiyaa ganacsiyada yaryar inay abuuraan muuqaalo xirfad leh. Madal fiidiyaha bulshada Vimeo ayaa soo saartay beta ee Vimeo Abuur, aalad abuur muuqaal gaaban ah. Soo hel sheekada saxda ah ee meheraddaada adiga oo isticmaalaya qaabab muuqaal ah, ama ka bilow xoq. Ku jar tifaftiraha caqli-gal ah, ku hagaaji qaabka iyo walxaha, u qaybi shabakadda, oo cabbir saamaynta hal meel.
Patreon wuxuu bilaabay sifada amaahda-yar. Patreon, oo ah goob loogu talagalay ganacsiyada xubinnimada si ay u helaan oo ay u maareeyaan macaamiisha, ayaa bilaabay Patreon Capital si ay amaah-yar u siiso macaamiisha Patreon. Patreon waxa uu helaa xogta ku saabsan dakhliga soo gala hal-abuurka, ka-qaybgalka, iyo haynta si uu u saadaaliyo ku habboonaanta amaahda. Patreon Capital waxay soo saartay ilaa iyo hadda daraasiin horu marin lacageed ah.
Khariidadaha Google ayaa ku dara sifo bulsheed oo leh Hagayaasha Maxaliga ah. Khariidadaha Google ayaa tijaabinaya qaab bulsheed oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay helaan oo ay raacaan Hagayaasha Maxaliga ah. La bilaabay 2015, barnaamijka Hagayaasha Maxaliga ah waxa uu u ogolaadaa ka qaybqaatayaasha Khariidadaha in ay kasbadaan heerka imtixaan sameeyaye iyagoo ku badalanaya faa'iidooyin kala duwan. Goobaha barnaamijka tijaabada ah, Google wuxuu ku darayaa batoonka Raac boggaga bogga Hagaha Maxaliga ah iyo tab "Adiga" si ay u taxdo talooyinka aagga - ganacsiyada, dhacdooyinka, iibka, iyo in ka badan.
Dfinity waxay bilawday madal il furan LinkedUp, oo loogu talagalay dadka waaweyn ee isku xidhka bulshada. Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee Davos, aasaasaha Dfinity Dominic Williams ayaa muujiyay tignoolajiyadeeda blockchain isagoo muujiyay shabakad bulsho oo furan oo la yiraahdo LinkedUp, oo ah nooca LinkedIn ee baahsan. LinkedUp waxa lagu dhisay madal Dfinity kaas oo ujeedadiisu tahay in la baahiyo intarneedka iyada oo la gelinayo adeegyada daruuraha nidaamyada madax-banaan.
GoDaddy wuxuu soo iibsadaa Over si uu uga caawiyo iibiyeyaasha inay abuuraan waxyaabo muuqaal ah oo onlayn ah. GoDaddy waxay la wareegtay Over, shirkadda ka dambeysa Over app, kaas oo ka caawiya ganacsiyada yaryar inay abuuraan waxyaabo muuqaal leh oo saameyn leh. Isticmaalka hambalyada la beddeli karo iyo qaabaynta, abka Over waxa uu caawiyaa in uu si degdeg ah u abuuro wax ku saabsan taleefanka gacanta ee Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, iyo aaladaha kale, oo ay ku jiraan suuqgeynta iimaylka iyo mareegaha internetka.
Shabakadda bulsheed ee is-diiwaangelinta MeWe waxay u soo saartaa MeWe Pro ganacsiyada. MeWe, oo ah shabakad bulsheed oo isdiiwaangelin ah oo xoogga saarta sirta, ayaa furtay goob ganacsi oo qiimo leh oo diiradda saareysa isku xirka kooxda iyo iskaashiga. Orod mid-ka-mid ah, dad-badan, iyo wada-sheekeysi kooxeed, oo ay la socdaan hawlaha jadwalka, Microsoft Office iyo Google Docs dhexgalka, iyo sir buuxda. Qiimuhu waa $3.99 isticmaale bishiiba.
HeyMama ayaa 2 milyan oo doolar u aruurisay shabakada hooyooyinka shaqeeya. HeyMama, oo ah shabakad bulsho iyo mid xirfad leh oo ka kooban hooyooyin shaqeeya, ayaa aruurisay 2 milyan oo doolar oo loogu talagalay maalgelinta abuur si ay u kordhiso awoodda ay ku taageerto haweenka goobta shaqada. Bulshada xubinimada ku salaysan codsiga waxa ay isku xidhaa hooyooyinka shaqadu wado ee dhamaan warshadaha
App-ka cusub ee bulshada Friended ayaa bilaabay. Friended waa shabakad bulsho oo cusub oo loogu talagalay isku xirka hal-ka-mid ah. U hel dadka wada sheekeysi macno leh Dhammaan is dhexgalka waa mid-ka-mid ah, iyada oo aan lahayn faallooyin dadweyne. Qof kastaa wuu ka jawaabi karaa dunta, faallooyinka duntana waxa ka heli kara boodhka ama jawaab-bixiyaha, laakiin marka jawaabtu timaado, wada hadalkaasi waa mid-ka-mid ah oo gaar ah.
Yubo wuxuu kor u qaaday $12.3 milyan kobaca caalamiga ah. Yubo, oo ah goob bulsheed oo loogu talagalay macaamiisha Generation Z (da'da 13 ilaa 25, qiyaas ahaan), ayaa ku dhawaaqday $12.3 milyan lacag aruurin ah oo ay hogaaminayaan Iris Capital iyo Idinvest Partners. Maalgelinta cusub waxay taageeri doontaa ballaarinta caalamiga ah ee Yubo waxayna dardargelin doontaa horumarinta goobta. Yubo wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaasha inay abuuraan goobo dood fiidiyoow ah oo toos ah halkaasoo streamers iyo daawadayaasha labaduba ay is dhexgalaan.
Xaqiiqada cusub ee Pinterest ee la kordhiyay ayaa u ogolaanaysa isticmaalayaasha inay "isku dayaan" qurxiyo. Pinterest waxay ku soo bandhigtay "isku day" abka mobaylka. Isticmaalayaashu waxay furaan kamarada Pinterest iyagoo raadinaya, dhagsii "isku day" si aad u heshid hadhka qurxinta, oo kor u jiid si ay uga dukaamaystaan ​​noocyada sida Estée Lauder, Sephora, BareMinerals, Neutrogena, iyo L'Oréal. Badhanka "isku day" ayaa sidoo kale ka soo muuqan doona alaabta la doortay, iyo sidoo kale raadinta ereyada la xidhiidha sida "lipstick matte" ama "bishimaha cas." Isku day inaadan isticmaalin jilicsanaanta maqaarka ama saamaynta beddelka sawirka.
Hunt Product ayaa soo saarta YourStack, loogu talagalay dadka iyo alaabta. Kooxda ka dambeysa Product Hunt, oo ah goobta-helitaanka badeecada, ayaa bilaabay YourStack, shabakad bulsheed halkaas oo macaamiishu ay kaga hadlaan alaabada ay ku raaxaystaan, ku taliyaan alaabada, oo ay raacaan khabiirada alaabada. Boggu waxa kale oo uu yeelan doonaa talooyinka pro, jabsiga alaabta, iyo su'aalaha lagu kicinayo dood kooxeed.
Wax kasta oo Brands-ku u baahan yahay inay ka ogaadaan TikTok sanadka 2020
Sanduuqa Saabuunta: Hay'adda calaamaduhu waa yoolka suuq-geyneed ee ugu hooseeya